နေကာမျက်မှန်များရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လိဒ်ကျောင်းသားအားမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း - သတင်း
နေကာမျက်မှန်သည်နေပူသောအခါ၌သာဖြစ်သည်ဟုထင်ရန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာကိုသူတို့အဓိကအသုံးချမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်လိဒ်သို့ရောက်သောအခါကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အပတ်စဉ်ညများ၌သူတို့၏အရိပ်များကိုဝတ်ဆင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲ ငါပန်ကာအဘယ်သူမျှမ -The- လျော့နည်း။
မင်းတို့ ၀ တ်ထားတဲ့နေကာမျက်မှန်တပ်ဖို့ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာငါတို့ဒီမှာသွားတယ်။
သင့်နှာခေါင်းအဆုံး၌အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ထားသည့်ပါးလွှာသောကြောင်မျက်မှန်မျက်မှန်များသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram feeds များကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ (ပိုမိုစျေးကြီးသောဗားရှင်း) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Kendall Jenner ၏လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ အနီရောင်ဖြစ်စေ၊ အနီရောင်ဖြစ်စေအနီရောင်ဖြစ်စေ၊ ဤကြည့်ခြင်းသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သတင်းဆိုးကို ၀ မ်းနည်းစွာဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ သို့သော် Missguided နှင့် Pretty Little Thing ၏စပျစ်သီးပြွတ်အပိုင်းသို့သွားခြင်းသည်အမြဲတမ်းသွားရမည့်လမ်းမဟုတ်ပါ။
2. ပို။ ပင်အခြေခံပတ်ပတ်လည်အရိပ်
သူတို့သည်သင်၏မြင့်မားသော Ray Bans ဖြစ်စေ၊ Primark မှသင်၏£2ခေါက်ခေါက်ဖြစ်စေဖြစ်စေဤအရိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကောင်းချီးပေးရန်မကြာသေးမီကအလွန်ခေတ်မှီသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ အများစုအတွက်သူတို့သည်နွေရာသီအဝတ်အစားကိုအောင်မြင်စွာ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းအချို့သူများအတွက်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ပါ ၀ င်ခဲ့သူများသည်ဂျင်မီဆဗီးလ် esqe ကိုသာကြည့်။ အဆုံးသတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သတိထားပါ၊ သင်လည်းဒီဆိုးရွားလှတဲ့အမျိုးအစားနဲ့မကိုက်ညီစေရန်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ကိုစစ်ဆေးပါ။
3. Kaleidoscope မျက်မှန်
ယခုဤအရာသည်သင်၏နေ့စဉ်အရိပ်များမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုမှသူတို့သည်တစ်သက်တာအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးသည်ဟုငါစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ ထိုနေ့ရက်တွင်ဝတ်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ (မည်သူသည်အရူးလစ်စ်ကျောင်းသားများမှတက်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း) သို့သော်၎င်းကို Beaverworks တွင်အနိုင်ကျင့်သည့်ညတွင် ထား၍ ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါကသင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျသို့သော်အမှန်တကယ်နှင့်အမှန်တကယ် fuckuckered ခံစားမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ခြင်း၌သူတို့ကိုကြိုးစားရန်အချို့သောကျပန်းလူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ပခုံးပေါ်မှာ pat အများအပြားရလိမ့်မည်။
ဆာ အမေဇုံမှသင်၏လှိုင်းရိုင်းသစ်များကို ၀ ယ်ယူကြောင်းမေးမြန်းသောအခါ ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။
ပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ဒီမျက်မှန်ဟာနွေရာသီအားလပ်ရက်တွေမှာမင်းကိုအပြည့်အဝရစေတယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့မျက်နှာအများစုကိုဖုံးအုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာမကောင်းတဲ့အရေပြားနေ့တစ်နေ့ဒါမှမဟုတ်နေမလွန်မီနေပူမှာနေတဲ့အချိန်တောင်မှ၊
သူတို့က 'ရှုပ်ထွေးသောလိဒ်စ်' အသိုင်းအဝိုင်း၏အာရုံကိုဖမ်းမိမည်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်အရိပ်များသည်ပုံမှန်နေ ၀ င်သောနေ့၏အောင်မြင်မှုကို ၀ တ်ဆင်သည်။
5. အဆိုပါ Curt Kobain Clout မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး
Kurt Kurt Kurt? ။ ။ ။ ။ ။ #fotografia #retrato #kurtcobain #kurtcobainglasses #rapnacional #raptrap #trap #skrrt #photography #portrait #people
မျှဝေသည် လူငယ် Moraes (@giovanimoraesfotografia) ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်၊ ည ၁၂း၅ နာရီ PST တွင်
ကောင်းပြီ၊ မင်းဒီမှာမြင်းတွေကိုကိုင်ထားလို့ရတယ်ငါတို့နောက်ဆုံးတော့ sexy အရိပ်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ပြီ (sarcasm နဲ့ပြောမယ်) ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ASaves Rocky, Lil Yachty ကသူတို့ဟာ faves တွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ၊ ဒီဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုမလှည့်စားခဲ့သူ Leeds ကောင်လေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စည်သွပ်နက်ဘေ့စ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ယောက်ျားလေးများ။
သို့သော် Hyde Park တွင်နေပူပြင်းသည့်ပူနွေးသောနေ့၌သို့မဟုတ်ထိုထက် ပို၍ ဆိုးရွားသည့်မိသားစုအားလပ်ရက် (သူတို့မှာ Acne စတူဒီယိုများသို့မဟုတ်စိန့်လော်ရန်စ်မူရင်းများဖြစ်သည့်တိုင်) ဝတ်ဆင်ရန်ရဲရင့်သူများအတွက် - သင်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်မှာရှိသည် စကားလုံးမဲ့။